११ गर्भ निरोध र जन्म नियन्त्रण प्रश्नहरूको उत्तर - औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार भारी खेल चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी, समाचार प्रेस घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा >> ११ जन्म नियन्त्रण प्रश्नहरू - उत्तर दिइयो
११ जन्म नियन्त्रण प्रश्नहरू - उत्तर दिइयो
यस वर्षको शुरुमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकका अनुसार यौन सक्रिय अमेरिकी of percent प्रतिशत महिलाले गर्भनिरोधकको केही प्रकारको रिपोर्ट गरेका छन् येल मेडिसिन । स्पष्ट रूपमा किनभने यो सामान्य छ, अफवाहहरू, गलतफहमीहरू, र जन्म नियन्त्रण मिथकहरू खाली गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ।
जब महिलाले गर्भनिरोधक विधि छनौट गर्दछन्, विभिन्न प्रकारका बारेमा पूर्व-धारणाले उनीहरूको निर्णयलाई असर गर्दछ। र हामी मध्ये धेरैले नकारात्मक जानकारी केहि प्रकार सुनेका छौं - जस्तै जन्म नियन्त्रणले तपाईंलाई वजन बढाउँदछ। वा, यसले क्यान्सर जोखिम बढाउँदछ र रेखाको तल उर्वरतालाई असर गर्न सक्छ। केहि व्यक्तिले यो पनि भन्छन् कि हर्मोनहरूले तपाईंलाई बौलाहा बनाउँछ।
यदि तपाइँ कहाँबाट शुरू गर्ने भनेर अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ भने, खराब अनुभवहरू र डरावनी कथाहरूको बारेमा रेडडिट ब्ल्याक होलमा पर्न सजिलो छ। त्यसो भए, अन्य फोरमहरूमा समान परामर्शको बारेमा रभ समीक्षा पढ्न। उपलब्ध धेरै विकल्पहरू मध्ये छनौट गर्दै — एउटा जुन तपाईंको जीवनशैली र व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि उत्तम हो जुन यो भन्दा पहिले कडा हुनुहुँदैन।
यो समय को लाभ, साइड इफेक्ट, जोखिम, र जन्म नियन्त्रण को प्रभावकारिता मा वास्तविक स्कूप प्राप्त गर्ने समय हो।
सामान्य जन्म नियन्त्रण प्रश्नहरू
यहाँ, प्राय: सोधिने जन्म नियन्त्रण प्रश्नहरूका उत्तरहरू फेला पार्नुहोस्, ताकि जब तपाईंलाई गर्भ निरोधको कुरा आउँदछ तपाईंलाई आवश्यक पर्ने जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ - र डराउनुपर्दैन कि तपाईंले गर्नुहुन्न।
१. के हर्मोनल जन्म नियन्त्रणले मलाई तौल बढाउँछ?
छोटो उत्तर होईन, भन्छजेटा कैसर, एमडी भन्छन्, युटा विश्वविद्यालयको परिवार नियोजनका सहायक प्राध्यापक। ठूलो पोखरी अध्ययनमा हामी वजनको वृद्धि देख्न सक्दैनौं तुलनात्मक हिसाबले तपाईले स्वाभाविक रूपले मेटाबोलिज्म र बुढ्यौलीको ढिलोबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसोभए, यसको मतलब यो छ कि अधिकांश महिलाको लागि, गर्भ निरोधक गोली, योनीको घण्टी र गर्भनिरोधक छाला प्याचले वजनलाई धेरै असर गर्ने सम्भावना हुँदैन। पुन: दोहोर्याउनुहोस्: हर्मोनल जन्म नियन्त्रण हो धेरै असम्भव तपाईलाई तौल बढाउनको लागि। यो सीधा एक डाक्टरको मुखबाट र एक सबैभन्दा विस्तृत (र अद्यावधिक) वैज्ञानिक अध्ययनबाट एक हो, प्रकाशित भयो मा जैव प्रौद्योगिकी जानकारी को लागी राष्ट्रिय केन्द्र । लगभग%% बिरामीहरूमा, जन्म नियन्त्रण हुँदा तरल पदार्थको अवरोध हुन सक्छ, यसलाई एडेमा पनि भनिन्छ। यसले तौलमा साना उतार-चढ़ाव निम्त्याउन सक्छ।
२. म महिनामा एक दिन मात्र गर्भवती हुन सक्छु?
यदि तपाईंसँग नियमित अवधि छ भने, तपाईंको शरीरले प्रत्येक महिना एक दिन मा, एउटा अण्डा निकाल्छ। तर जब तपाईं गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ विन्डो २ 24 घण्टा भन्दा लामो हुन्छ। एक अन्डा मात्र ovulation पछि 12 देखि 24 घण्टा को लागी मल गर्न सकिन्छ, अनुसार अमेरिकी गर्भावस्था एसोसिएशन । तर, शुक्राणु शरीरमा सेक्स पछि -5- for दिनसम्म बाँच्न सक्छ। अण्डाहरू उपलब्ध भएको दिनमा त्यो थप्नुहोस्, तपाईंको सबैभन्दा उर्वर विन्डो लगभग 7-7 दिनसम्म उदाउँदछ। अर्को शब्दहरुमा, तपाई लगभग एक हप्ताको लागी गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ।
प्राकृतिक चक्रहरू एक FDA- अनुमोदित अनुप्रयोग हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको ovulation चक्र ट्रैक गर्न अनुमति दिन्छ। यो राम्रोसँग बुझ्नको लागि हर्मोन-मुक्त तरिका हो जब तपाईं - र सम्भवतः गर्नुहुन्न - सम्पूर्ण महिना गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ। अनुप्रयोगले प्रयोगकर्ताहरूलाई दैनिक भन्छ कि यो हरियो दिन हो, वा महिनाको रातो दिन। रातो दिनमा प्रयोगकर्ताहरू गर्भवती हुने सम्भावना बढी हुन्छन् र अनियोजित गर्भधारण रोक्न कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्दछ वा सेक्सबाट अलग रहनु पर्छ। यो उत्तम प्रयोगको साथ गर्भ निरोधकको रूपमा 98 percent प्रतिशत प्रभावकारी छ, र use percent प्रतिशत विशिष्ट प्रयोगको साथ प्रभावी।
I. जब म हार्मोनल जन्म नियन्त्रण सुरु गर्छु म कन्डम बिना सेक्स गर्न सक्छु?
यदि तपाईं गर्भवती नहुने आश्वासन चाहानुहुन्छ भने होईन। यसले तपाईको नयाँ नियन्त्रण प्रकारको पूर्ण प्रभाव लिनको लागि एक हप्ता सम्म लिन सक्दछ - कस्तो प्रकारको गर्भनिरोधक छनौटमा निर्भर गर्दछ (एउटा गोली, IUD, इम्प्लान्ट, वा डेपो-प्रोप्रा शट) र जहाँ तपाईं हाल तपाईंको चक्रमा हुनुहुन्छ। यो गोली सुरु गरे पछि सात दिनको लागि कन्डम प्रयोग गर्नु उत्तम हो, वा इम्प्लान्ट, IUD, वा शट प्राप्त गर्दा — त्यसोभए तपाईं स्पष्ट हुनुहुनेछ।
तामा IUD एक विशेष मामला हो। यो तुरुन्तै प्रभावकारी हुन्छ नियोजित अभिभावक । र याद गर्नुहोस्, केवल कन्डमले मात्र STDs र STIs बिरूद्ध बचाउन सक्छ।
Copper. के तामा IUD ले तपाईंको अवधि खराब बनाउँछ?
प्यारागार्ड , एफडीए द्वारा अनुमोदित र अमेरिकामा उपलब्ध एक मात्र तांबे IUD का केही फाइदाहरू छन् जुन प्रयोगकर्ताहरूले मनपराउँदछन्: यो गैर-हर्मोनल हो, यो १० बर्षसम्म रहन्छ, यो स्तनपानको समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, र यो आपतकालिनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। गर्भनिरोध यदि असुरक्षित सेक्स पछि पाँच दिन भित्र सम्मिलित गरियो। तर अनुसार मेयो क्लिनिक , प्यारागार्डसँग सम्बन्धित साइड इफेक्टमा अवधि, ऐंठन, गम्भिर मासिक दर्द, र भारी रक्तस्राव बीचको रक्तस्राव समावेश छ। यसको कारणले गर्दा, एक तामा IUD केही महिलाहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो फिट हुन सक्दैन।
Hor. हर्मोनल जन्म नियन्त्रण प्रयोग बांझपन को कारण हुन सक्छ?
तपाईंले सुन्नुभएको होला कि गोली लिने, इम्प्लान्ट भएको, वा लामो अवधिको IUD को बर्षले गर्भवती हुन गाह्रो बनाउँदछ जब तपाईं तयार हुनुहुन्छ - तर त्यो मिथक मात्र हो। गर्भनिरोधका यी तरिकाहरूले मात्र प्रजनन क्षमतामा हस्तक्षेप गर्छन् जब उनीहरू प्रयोगमा हुन्छन्।
डा। कैसर भन्छन्, कुनै पनि प्रकारको जन्म नियन्त्रणले गर्भवती हुने क्षमतालाई घटाउँदैन जब तपाईं रोक्नुहुन्छ। तपाईको गर्भवती हुने क्षमता जुन जुन नियन्त्रणको पहिले थियो जुनमा फिर्ता जान्छ। यसको मतलब यदि तपाईं गर्भवती हुने ठूलो मौका पाउनु भएको थियो भने, तपाईं अझै पनि गर्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग कम मौका थियो भने, यो कम मौकाको रूपमा फिर्ता जान्छ। तपाईंको गर्भवती हुने क्षमताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक भनेको उमेर हो। यदि तपाईं at० बर्षको गर्भवती हुने कोशिश गर्नुहुन्छ भने, यो तपाईंको उमेर २ 26 बर्ष भन्दा कडा हो।
I. के मैले प्रत्येक महिना अवधि अवधि गर्नुपर्दछ - चाहे म जन्म नियन्त्रणमा छु?
को मिरेना र Skyla IUDs तपाईंसँग अवधिहरूको संख्या कम गर्न, वा तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दछ। इम्प्लान्ट, गोली (जब कुनै खास तरिका प्रयोग गरिएको थियो), र शटले तपाईंलाई पिरियड हुनबाट रोक्न सक्छ। र यस कुराको तथ्य यो हो, यो पूर्ण रूपमा ठीक छ र सुरक्षित छैन तपाईंको जन्म नियंत्रण विधिका कारण अवधि।
तपाईको शरीरलाई मासिक धर्म आवश्यक हुन्छ जब त्यहाँ गर्भावस्थाको सम्भावना हुन्छ नियोजित अभिभावक । हर्मोनल जन्म नियन्त्रणले ovulation रोक्छ र गर्भाशय अस्तर निर्माण हुनबाट रोक्दछ। पिलि or प्याकहरू वा बीचमा तपाईले अनुभव गर्नुभएको रक्तस्राव नुभेरिंग्स फिर्ती रक्तस्राव हो, हर्मोनको खाली स्थानको जवाफ हो, तपाईको शरीरलाई चाहिने कुरा होईन।
I. म मेरो आईयूडी हराउन सक्छु?
तपाईं — एक IUD बाहिर झर्न सक्छ (यसलाई निष्कासन भनिन्छ), वा यस्तो स्थानमा सार्न सक्नुहुन्न (यसलाई छिद्र भनिन्छ)। यी दुई जोखिमहरू हुन् जस तपाईंले तामा वा हर्मोनल IUD छनौट गर्दा विचार गर्नुपर्दछ, जस्तै Mirena वा Kyleena तपाईंको गर्भनिरोधको रूपमा, को अनुसार कोलोराडो को व्यापक महिला स्वास्थ्य केन्द्र ।
निष्कासन प्राकृतिक रूपमा हुन सक्छ, तर यो सामान्य छैन। यो केवल IUD प्रयोगको लगभग 3% मा देखा पर्दछ। छिद्र, जब तपाईंको IUD गर्भाशयको मांसपेशीमा वा मार्फत धकेल्छ, दुर्लभ जटिलता हो, प्रत्येक १,००० IUD प्रविष्टिहरूमध्ये केवल एक वा दुईमा देखा पर्दछ। यो पनि सबैभन्दा खतरनाक हो। त्यहाँ धेरै थोरै घटनाहरू भएको छ जहाँ आईयूडी श्रोणि, पेटको गुहा, ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल पथ र मूत्राशयको क्षेत्रहरूमा सर्छ। यदि IUD गर्भाशय बाहिर बाहिर जान्छ भने, IUD शल्य चिकित्सा हटाउनु पर्छ।
I. के मैले मेरो जन्म नियन्त्रण गोली लिनु पर्छ? ठिक प्रत्येक दिन उही समय?
हो, तपाईले गर्नु पर्छ। यद्यपि यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ तपाइँ कुन प्रकारको गोली लिनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। त्यहाँ दुई प्रकारका सामान्य रूपमा निर्धारित गर्भनिरोधक गोलीहरू छन् - संयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोली (सीओसी) र मिनी गोली, वा प्रोजेस्टिन-मात्र गोली (पीओपी)। सीओसीले ओभुलेशन रोक्छ, त्यसैले त्रुटिको लागि त्यहाँ थप ठाउँ छ।
यद्यपि Percent० प्रतिशत अमेरिकी कलेज अफ ओब्स्टेट्रियसियन एन्ड गाईनाकोलोजिष्ट्स (एसीओजी) का अनुसार मिनी गोली लिने बेलामा पनि महिलाको ओभुलेट हुन्छ। मिनी गोलीको सक्रिय तत्त्वले गर्भाशय ग्रीवा र गर्भाशय अस्तरलाई एक घण्टा २ 24 घण्टाको लागि मात्र गाढा पार्दछ। त्यसो भए, यो समयावधि हो (र समय-संवेदी) यस अवधि भित्र अर्को खुराक छ।
के कटौती योग्य र अधिकतम पकेट बाहिर को बीच फरक छ
दुबै तरिकाहरूका लागि सुसंगत प्रयोग सबैभन्दा प्रभावकारी हुन आवश्यक पर्दछ, त्यसैले तालिकामै रहनु उत्तम हुन्छ तपाईंको दैनिक डोज हराउँदा वा बिर्सिन। महत्त्वपूर्ण छ? तपाईंको प्रिस्क्रिबर वा फार्मासिष्टको साथ जाँच गर्दै तपाईंको जन्म नियन्त्रणले तपाईंको अन्य औषधीहरूलाई कसरी असर गर्न सक्छ भनेर हेर्नका लागि। केहि औषधिहरू, जस्तै केहि एन्टिबायोटिक वा एन्टी-जब्ती औषधिहरू, मौखिक गर्भनिरोधकको स्नेह शोषणको प्रबल सम्भावना हुन्छ। र केहि एन्टीकोआगुलेन्ट ड्रग्सहरूको हार्मोनल जन्म नियन्त्रणसँग एक धेरै खतरनाक अन्तर्क्रिया हुन्छ।
Birth। के त्यहाँ एक उत्तम प्रकारको जन्म नियन्त्रण छ?
होईन। उत्तम प्रकारको जन्म नियन्त्रण भनेको तपाईको लागि काम गर्ने प्रकारको हो, डा। कैसरले भने। त्यहाँ सबै भन्दा राम्रो फार्म वा समग्र विजेता छैन जब यो जन्म नियन्त्रणको कुरा आउँछ। प्रत्येक महिलाले निर्णय गर्नु पर्छ कि उनी, उनको जीवनशैली, र उनको शरीरको लागि के उत्तम हुन्छ। महिलाको स्वास्थ्य विशेषज्ञ, OB / gynecologist, वा तपाईंको प्राथमिक हेरचाह चिकित्सकसँग बस्दै र कुराकानीले तपाईंलाई विकल्पहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ।
१०. पिलले क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ?
यो एक मिथ्या प्रकारको हो। हालसम्म शोधकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि मौखिक गर्भ निरोधकमा महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको मानव निर्मित संस्करणहरू हुन्छन्, हार्मोनको तहमा हुने परिवर्तनले स्तन क्यान्सरलाई ट्रिगर गर्न सक्दछ, तर यसले डिम्बग्रंथि र गर्भाशय क्यान्सरबाट पनि बचाउन सक्छ। विस्तृत अध्ययनले देखायो कि गर्भ नियन्त्रण गर्भाशय र डिम्बग्रंथि क्यान्सरको सम्भावना कम गर्न देखाईएको छ, डा कैसर बताउँछन्।
तर जहाँसम्म स्तन क्यान्सरसँग सम्बन्धित छ त्यहाँ केही जोखिम छ, उनी भन्छिन्। डेनमार्क समूहले हजारौं महिलाहरूको पोखरी अनुसन्धान गरे र पत्ता लगाए कि जन्म नियन्त्रणले स्तन क्यान्सरको जोखिमलाई न्यूनतम बढाउन सक्छ। यो एक धेरै सानो तर बढेको जोखिम हो जुन हाम्रो फिल्डमा अन्य कुनै ठूलो पोखरीले ल्याएको छैन। म मेरा बिरामीहरूलाई भन्छु कि यो त्यस्तो चीज हो जसको बारेमा ध्यान राख्नुपर्ने हो, तर चिकित्सा पेशेवरहरूको हैसियतमा हामी यसमा यति धेरै तौल राख्दैनौं।
११. के हर्मोनल जन्म नियन्त्रणले मेरा भावनाहरूमा असर पुर्‍याउँछ?
हुनसक्छ, तर यो केस-द्वारा-केस आधार हो, र विज्ञान विवादास्पद छ। १ 14 बर्ष भन्दा बढी उमेरका १० लाख भन्दा बढी डेनिश महिलाहरूको अध्ययनले diagnosis विश्वसनीय र रचनात्मक डेटा जस्तै निदान कोडहरू र प्रिस्क्रिप्शन रेकर्डहरू प्रयोग गरेर - यसले जोड दिन्छ कि त्यहाँ जोडिएको डिप्रेसनको जोखिम बढेको छ। सबै हार्मोनल गर्भनिरोधका प्रकारहरू। तर त्यो पूर्ण कथा होइन।
धेरै जसो ठूला अध्ययनहरूमा हामी जन्म नियन्त्रण र मुड स्विingsको बीचमा कडा सम्बन्ध देख्दैनौं, तर यदि बिरामी मुड स्वि sw्ग वा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावहरू बारे चिन्तित छ भने, त्यहाँ विकल्पहरू छन् जुन हार्मोनहरू थोरै वा कम नै हुन्। यो सामान्य छैन, तर मैले बिरामीहरू देखेको छु जसले अनुभव र प्रभावहरू अनुभव गरेका छन् उनीहरूको उदासीनताको साथ उनीहरूको गर्भनिरोधकबाट। यदि तपाईं भावनात्मक परिवर्तनहरूको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, म बिरामीहरूलाई तिनीहरूका प्राथमिक डाक्टर वा मेडिकल पेशेवरसँग गैर-हार्मोनल समाधान फेला पार्न साझेदारी गर्न प्रोत्साहित गर्दछु।
यदि तपाईंसँग डिप्रेसनको इतिहास छ, वा iएफ हार्मोनल जन्म नियन्त्रण तपाईको लागि ठीक छैन, त्यहाँ अन्य धेरै विकल्पहरू छन् - तामा IUD बाट प्राकृतिक चक्र अनुप्रयोग - जुन तपाइँको प्रजनन छनौटहरूलाई तपाइँको हातमा फिर्ता राख्न मद्दत गर्दछ।
तपाईं स्तनपान गर्दा हार्मोनल जन्म नियन्त्रण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
के यो एलर्जीको औषधि सेवन गर्दा रक्सी पिउन सुरक्षित छ?
2 ibuprofen एक दिन धेरै धेरै छ
चिन्ता को लागी कुन बीटा ब्लकर उत्तम छ?
जब एक मानसिक स्वास्थ्य दिन लिनुहोस्
गर्भावस्था को समयमा रगत को थक्के सामान्य पारित छ
रगत को प्रकार मा के फरक छ